दुब्लो हुनुहुन्छ ? यसरी बढाउनुस् तौल
काठमाडौं, २६ पुस — दुब्लो शरीर भयो भने व्यक्तित्व राम्ररी खुल्न पाउँदैन । हर्मोनमा असन्तुलन, कब्जियत, पेटमा कीरा पर्ने, मधुमेह, मानसिक चिन्ता, धेर व्यायाम गर्ने, थाइराइडको समस्या आदिले गर्दा मानिस दुब्लो हुन्छ ।
दुब्लो मानिसलाई अरूले हेप्न खोज्छन् । तपाईंलाई पनि दुब्लोपनका कारण संकोच भएको छ भने यहाँ बताइएका आहार लिने गर्नुस् ।
पूर्ण अनाज (ह्वोल ग्रेन)
गहुँ, मकै, जौ, ओट्स जस्ता पूर्ण अनाज खाँदा अनेकौं रोगबाट बच्न सकिन्छ । पूर्ण अनाजमा पिँधेको अनाजमा भन्दा बढी क्यालोरी र भिटामिन हुन्छ र यसले शरीरलाई ऊर्जा प्रदान गर्छ ।
दूध, चीज, मम्फली बदाम, बटर, खजुर, दाल र गेडागुडीमा प्रोटीनको मात्रा अधिक हुन्छ । दिनदिनै यसलाई सेवन गर्दा शरीरको कमजोरी हट्छ ।
आलुमा कार्बोहाइड्रेट्स र सुगर पर्याप्त हुन्छ । आलुलाई उमालेर, ग्रिल गरेर वा स्यान्डविच बनाएर खान सक्नुहुन्छ । दिनदिनै आलु खाँदा केही दिनमै तौल बढ्छ ।
केरा वा आँप
दिनमा कम्तीमा दुईवटा केरा खानुस् । योग वा व्यायाम गरेपछि केरासँग दूध पिउनु लाभदायक हुन्छ । केरा मन पर्दैन भने आँप खान सक्नुहुन्छ ।
बदाममा भिटामिन, आइरन, फस्फोरस र क्याल्सियमको मात्रा अधिक हुन्छ । यसले शरीरलाई स्वस्थ बनाउनुका साथै सुन्दर पनि राख्छ । रातमा तीनवटा बदाम भिजाएर राख्नुस् । बिहान खाली पेट त्यो बदाम खानुस् ।
मम्फली बदाममा क्यालोरी र बोसो अत्यधिक हुन्छ । दिनदिनै बदाम खाँदा शारीरिक कमजोरी हट्छ ।
ओखरमा क्यालोरी उच्च मात्रामा हुन्छ जसले शरीरलाई स्वस्थ राख्छ । नियमित रूपमा २० ग्राम ओखर खाँदा तौल बढ्न थाल्छ ।
नरिवलले सुन्दरता बढाउनुका साथै शरीरलाई स्वस्थ राख्छ । नरिवलको दूधमा भोजन पकाएर खाँदा शरीरमा क्यालोरीको मात्रा बढ्छ । दिनदिनै नरिवल पानी तथा नरिवलबाट बनेका कुरा खाँदा पनि तौल बढ्छ ।
अश्वगन्धा, शतावरी जस्ता आयुर्वेदिक औषधि र नियमित व्यायामले पनि तौल बढाउन सहायता गर्छन् ।
पुस २६, २०७४ मा प्रकाशित
यी कुरा झुक्केर पनि फ्रीजमा नराख्नुस्
रुसी वैज्ञानिकको निश्कर्ष – गाईको गहुँतबाट हुन्छ १४८ प्रकारका रोग निको !
दुर्घटना अपडेट : मृत्यु हुनेको संख्या ५ पुग्यो, गम्भीर घाइतेलाई हेलिकप्टरबाट पोखरा पठाइयो पर्वत— पर्वतमा भएको बस दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या ५ पुगेको छ । तीन जनाको घटनास्थलमै र दुई जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो । मृतकको सनाखत हुन नसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बा...
दुईतिहाइ पाएका मुख्यमन्त्रीको ‘ल्याङ–ल्याङ’ पारा : तोकिएन स्थायी राजधानी, राखिएन नाम
केन्याको होटलमा भएको आक्रमणमा मर्नेको संख्या २१ पुग्यो
नाता पर्ने बालिकालाई बलात्कार गरेकाे आराेपमा होटल सञ्चालक पक्राउ
टेरिजा मेले जितिन् विश्वास मत, सांसदहरूलाई एकजुट हुन आह्वान
पाँचथरको फिदिममा ट्याक्टर दुर्घटना : एकको मृत्यु, तीन घाइते